သင်၏အစာစားချင်စိတ်ကိုပျော်မွေ့ခြင်းအတွက်ကာကွယ်ပါ (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
မကြာသေးမီကပို့စ်တွင် (မူးယစ်အပြုအမူ), ငါအကြံပြုယနေ့အလွန်ဖြားယောင်းဆူအောင်ကျွေးသောအစာနှင့် hyper- လှုံ့ဆော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများထုံနိုင်ကြောင်း အများဆုံး သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်များကလုံလောက်စွာ overdo လျှင် ဦး နှောက်၏ပျော်မွေ့တုံ့ပြန်မှု။ ဒီအတိတ်အပတ် အသစ်သောသုတေသန သိပ်ဆွအမှန်ပင်တဖြည်းဖြည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့ကျလာသောကြောင့်ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံသူတွေကို၏ဦးနှောက် numbs ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာအစတစ်လမ်းထွက်မှထောက်ပြသည်။
ခြောက်လကျော်လ, ပိုပြီးဆူအောင်ကျွေးသောအစားအစာများကိုစားသောသူအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဦးနှောက်ဟာ ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အမျိုးသမီးများသည်အလွန်အမင်းစိတ် ၀ င်စားမှုပိုမိုရရှိစေသည့် (အကျိုးအမြတ်မရရှိသူများထက်) ပျော်ရွှင်မှုအပေါ်တုန့်ပြန်မှုနည်းသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်သူတို့၏ချုပ်တည်းမှုကိုယုတ်လျော့စေသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အောက်သို့လှည့်ပတ်သွားသည်။ ဦး ဆောင်သုတေသီအဲရစ်စတို၊
ဒါကကိုယ်နှိုက်ကနောက်ထပ်ဆု [လုပ်နည်းကျွမ်းကျင်သူ] circuitry blunts ကျော်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးအလားအလာသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးကို circuitry ၏အားနည်း Response တစ်ဦးအစာကျွေးခြင်း-ရှေ့ဆက်ထုံးစံ၌အနာဂတ်ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက်အန္တရာယ်တိုးပွားစေပါသည်။
အစားအစာနှင့်လိင်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လူ့အစာစားချင်စိတ်ကိုဆုချတိုက်နယ်၏ striatum ရှိ dopamine (D2) receptor အရေအတွက်အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးသည်။ ကောင်းသောအရာများစွာကိုအလွန်အမင်းရယူပြီးနောက် receptors များကျလာသောအခါ ဦး နှောက်သည်တုန့်ပြန်မှုနည်းပါးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပျော်မွေ့ခြင်းမှအကျိုးနည်းသည်။ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော dopamine receptors ၏နောက်မှကြည့်ပြီးနောက်နှင့်ပြီးနောက်ကြည့်ပါ။ ) ၎င်းသည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုခံစားချက်များကို ပိုမို၍ ပင်ရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဒီလျော့နည်းကျဆင်းလွယ်တဲ့ sensitivity ရဲ့ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုကကယ်လိုရီနဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုကျော်လွန်သွားပြီးမလိုလားအပ်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာများအဖြစ်ပြသထားတယ် -
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် [ဆုချီးမြှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုထိန်းညှိပေးသည့်အာရုံကြောလွှဲပြောင်းပေးသူ] အလုံအလောက်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာတည်ငြိမ်သည်။ ၄ င်းတို့ကုန်ခမ်းသွားသောအခါသို့မဟုတ်မျှတမှုမရှိသောအခါကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသည့်“ ကလောင်အမည်စိတ်ခံစားမှု” သည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဤမှားယွင်းသောစိတ်ခံစားချက်များသည်အလွဲသုံးစားမှု၊ ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို [မူးရူး] ဖို့မောင်းနိုင်ပါတယ်။ဂျူလီယာရော့စ်, အာဟာရ psychotherapist
အစာစားချင်စိတ်ရောဂါဗေဒပုံမှန်အားဖြင့်နာတာရှည်သင်တန်း ယူ. ကုသမှုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်ပိုလျှံမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဦးနှောက် sensitivity ကို၏သဘာဝအောက်ဖက်လိမ်ရှင်းပြသည်။ သို့သော်သစ်ကိုသုတေသနပြုလည်းသွယ်ဝိုက်အကူအညီမရပါကဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို reverse ဖို့လမ်းကိုအရိပ်အမြွက်: သူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအပြုအမူကိုရပ်တန့်ပါ မကြာမီတတ်နိုင်သမျှကြောင့်အဝလွန်သို့မဟုတ် hypersexuality ထဲသို့လိုင်းဖြတ်သန်းသွားသည်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲ.
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပိုလျှံဦးနှောက်ပွောငျးလဲလြှငျ, ထိန်းချုပ်မှု ပို. ပို. ခက်ခဲအောင်, ထို့နောက်ပြဿနာအပြုအမူအတင်းအကြပ်တဖြည်းဖြည်းဦးနှောက်၏ sensitivity ကိုပြုပြင်, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသိသိသာသာကပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ကျွန်မမကြာခဏ porn ကိုရှောင်ရှားပြီးတစ်လသို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့လမ်းကိုပြန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်လုပ်ကြံသောအားဖြင့်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်တစ်ကြွင်းသောအရာပေးသူကိုမိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများသည်၌ဤ turnaround စောငျ့ရှောကျ။
အဆိုပါ ဆုတ်ခွာဒုက္ခ သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုနှိုးဆွဖို့အသည်းအသန်ဖြစ်နေချိန်မှာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ကနေသိနိုင်ပါတယ် Self-အစီရင်ခံစာများ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်မကြာမီပိုပြီးအထိခိုက်မခံဖြစ်လာ၏။ ထိုသူတို့သည်များစွာသောဒေသများရှိတိုးတက်မှုသတိထားမိ: ဒီတော့ထွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်, အကောင်းမြင်, အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်ချဉ်းကပ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်လျှော့စိုးရိမ်စိတ်နှင့်။ သူတို့ဟာဝေး-ရောက်ရှိသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်၏သဘာဝ sensitivity ကို restore ပြန်ကနေရပ်တသောအပြောင်းအလဲတွေဟာဘယ်လောက်မှာအံ့သြနေကြသည်။
သူတို့ဆုလာဘ်-circuitry sensitivity ကို restore ပြန်ပစ်မှတ်ကြောင်းကိုနားလည်ပြီးတာနဲ့သူတို့ဦးတည်ချက်တစ်ခုနှစျသိမျ့အသိရဖို့။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို (သို့မဟုတ်အရေးမယူ) နဲ့စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများနှင့်အခြားရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်ပါ။ သူတို့ဟာသူတို့ပြင်းထန်သောဆွအောက်ပါမြျှောလငျ့နိုငျဟာအီများနှင့်မတရားသောအသိအမှတ်ပြုရန်စတင်ဖို့။ သူတို့ဟာအကောင်းဆုံးအီနှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကများသောအားဖြင့်ချိန်ခွင်လျှာကိုပြန်သွားဖို့သူတို့ကိုယူကြောင်းလျှော့ချပေးခဲ့သောအရာကိုထုတ်တွက်ဆ။ သိပ်ဆွ၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောကုန်ကျစရိတ်ကို သိ. သူတို့သတိရှိရှိလုပ်ကြဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပြင်းထန်သောဆွ၏အကျိုးကျေးဇူးများများအတွက်ရွေးချယ်ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ။
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၎င်းတို့သည်စွဲလမ်းနေသောလိမ်အားနှင့်မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုအပြည့်အဝနားလည်ကြသည်။ သူတို့ကကားမောင်းတဲ့နေရာပြန်ရောက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အကောင်းမြင်သဘောထားပြန်လာကြပါတယ်။ တစ်ခုပြောခဲ့သည်
ရုပ်ပုံကြီးကိုကြည့်။ သင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှဤမျှလောက်မရရှိပါ။ ပျော်ရွှင်မှုတောင်မှမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်သင်ဆိုးဆိုးရွားရွားလိုအပ်နေပုံရသော်လည်းမတွန်းလှန်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိတဲ့ ဦး နှောက်ကဒီပြrewardနာကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဆားကစ်အချက်ပြမှုများကိုယုတ္တိနည်းဖြင့်ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်များဦးနှောက်ဆူအောင်ကျွေးသောအစားအစာနှင့်အစွန်းရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများမှတဆင့်ပြန်လည်းအများကြီးဆွကနေ bounce ဖို့လိုအပ်ပုံကိုရှည်လျားပြသုတသေနပွုမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအကြီးပါလိမ့်မယ်။ ယခုပင်လျှင်ကျနော်တို့က adenosine receptors ဖိန်းဓာတ်စားသုံးမှုချုပ်ရာအောက်ပါသူတို့ရဲ့ပုံမှန်အရေအတွက်ပြန်လာမတိုင်မီအကြောင်းကို 14 ရက်ကိုငါသိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မတရားသောနှင့် Moody ရစ်ကြလိမ့်မည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသိကြသည့်အခါကျနော်တို့ကိုပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူသူတို့ကို outlast ဖို့ willpower မှေးနိုငျသညျ။ ထိုအတောအတွင်းကျွန်တော်ဦးနှောက် sensitivity ကို restore နှင့်အောက်ဖက်လိမ်မှလွတ်မြောက်ရန်ကြာသောအရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ချက်စေနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ဦးနှောက် sensitivity ကိုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်မှကြွလာသောအခါသေချာဖြစ်စေရန်, ကျွန်တော်တစ်ဦးစဉ်ဆက်ပေါ်မှာရှိသမျှဖြစ်ကြသည်။ အချို့ကဦးနှောက်ကြောင့်ဆုလာဘ် circuitry ၏သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်နည်းပါးလာ dopamine receptors ဖို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာပိုပြီးအားနည်းချက်ရောက်ရှိမည်။ စိတ်ဒဏ်ရာ, စိတ်ဖိစီးမှု, အထီးကျန်ဆန်, ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးနဲ့အခြားဦးနှောက် dysregulate ။ သို့သျောလညျးကိုတောင် သာမန် ဦးနှောက် Over-ဆွကနေတိုးမြှင့်မကျေနပ်မှုများအတွက်အန္တရာယ်မှာရှိပါတယ်။
အမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးပုံနှစ်ပုံသည်ယခုအခါအဝလွန်နေကြသည်နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူ 17% ပြီးသားရှိပါတယ် အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူလက္ခဏာဖေါ်ပြခြင်း။ အစားအစာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များအားသွေးဆောင်လိုသောစိတ်ပညာသည်ရောဂါဗေဒသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းမှုပင်မဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်ပါပဲ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ထုတ်လုပ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်အားဖွင့်အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍ us။ ဦး နှောက်ရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုကြောင့် Hyper-stimulation ကိုတုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့တုန့်ပြန်ခြင်းဟာပုံမှန်ပါပဲ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်စဉ်ဆက်မပြတ်ရောက်ရုံသာမကချောသောဆင်ခြေလျှောနှင့်လည်းရင်ဆိုင်ရသည်။
ကောင်းမွန်သောသတင်းကအနည်းဆုံးအချို့ဒီဂရီ, ငါတို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ကျနော်တို့စဉ်ဆက်တက်ဆင်းချင်းစီဆလိုက်နိုင်ကြောင်း အပြုအမူ။ ကြာကြာကျနော်တို့ binging ပြီ, ကြာကြာကပုံမှန်ဦးနှောက် sensitivity ကို restore လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အများစုကကြာပါသည်။ သို့သျောလညျးအမြားအပွားကအောင်မြင်ရန်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့် ဦး နှောက်အတွင်းရှိဤအစာစားချင်စိတ်ယန္တရား၏အလုပ်လုပ်ပုံသည်ဘုံအသိပညာမဟုတ်သေးပါ။ အကျိုးဆက်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည် မပေးနိုင် လိင်သို့မဟုတ်အစားအစာအစွန်းရောက်ဗားရှင်းအားဖြင့် Over-နှိုးဆွဖြစ်, သာပုံမှန်မဟုတ်သောလူဦးအဝလွန်သို့မဟုတ် hypersexual ဖြစ်လာ၏။ အပြုအမူနှင့်ဦးနှောက် sensitivity ကိုအမှန်တကယ်အပြန်အလှန်ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ရောဂါဗေဒသို့လျှောရှောင်ရှားနိုင်ပေမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇမိတ်ကပ်များကသတ်မှတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်သောအားကောင်းသောစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားများဖြင့်ဈေးကွက်တင်ထားသောကောင်းမွန်သောအရသာရှိသောအရည်အသွေးကောင်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏အထိခိုက်မခံမှုနှင့်ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန် (သို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်) ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သတိရှိရှိမမောင်းနှင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အောက်သို့လှည့်ပတ်သွားနေသောကြိုးများတပ်ဆင်ထားသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါတို့သညျလူသားတို့အသိအမှတ်ပြုထားပြီးထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်၏ sensitivity ကိုကျော်အများကြီးပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ ဤသည်အသစ်သောသုတေသနကထင်ရှားအပြုအမူကိစ္စရပ်များကြောင့်စေသည်။
အပ်ဒိတ်: ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့အတက်ကြွဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းအင်း